Shiinaha Shiinaha Qiimaha Tayada Sare ee Qiimaha Taagan Cas soosaarayaasha cusub ee Apple iyo alaab-qeybiyeyaasha | AGR
Shiinaha Qiimaha Jumlada Tayada Sare Qiimaha Casaanka cusub Apple
Qiimaha nafaqada ee tufaaxa
1, tufaaxa waa nooc ka mid ah cuntada kalooriyada yar, 100 garaam kasta wuxuu soo saaraa 60 kcal oo kuleyl ah.Apple nafaqooyinka ku jira milmayaasha, oo ay ku fududaan karto jirka bini'aadamka, loona yaqaan "biyaha nool" .Waxay ka caawisaa kala dirida baaruudda iyo maqaarka ka dhig mid jilicsan oo jilicsan.
2, tufaaxu wuxuu leeyahay "miro xigmad ah", "miro xusuus" magac amaan leh. Cunista tufaax badan ayaa muddo dheer caan ku ahaa inay hagaajiso xusuusta iyo caqliga.Tabaalooyinku waxay hodan ku yihiin sonkorta, fiitamiinnada, macdanta iyo nafaqooyinka kale ee muhiimka u ah maskaxda.
3. Tufaaxu wuxuu hodan ku yahay zinc. Sida lagu sheegay cilmi baarista, zinc waa qeyb ka mid ah enzymes-yada muhiimka u ah jirka bini'aadamka waana cunsur muhiim u ah kor u qaadida koritaanka iyo horumarka.
4. Udgoonka tufaaxu waa daawo ka hortagta niyad jabka iyo diiqadda.Khubaro khibrad leh ayaa ogaatay baaritaano badan kadib in, udgoon badan, udgoonka tufaaxa uu leeyahay saameynta ugu weyn ee nafsiyeed ee dadka, waxay ku leedahay saameyn muuqata ciribtirka niyad jabka maskaxda. dalabku wuxuu cadeeyay in niyada bukaanada qaba niyad jabka maskaxeed ay sifiican u hagaagtay kadib markay urinaysay udgoonkii tufaaxa, ruuxu wuu dabcay oo wuu faraxsan yahay, niyad xumadana waa laga saaray
5. Aashitada malic-ka ah ee ku jirta tufaaxa waxay leedahay saameyn is caddeyn ah.Dad badan ayaa ka walwala halista ilkaha bololka oo aysiidhka tufaaxa dartiis. Tufaaxa la siiyay farmaajo wuxuu xaddidaa aashitada, cunista tufaaxu sidoo kale waxay kaa caawin karaan nadiifinta ilkahaaga si wax ku ool ah.
Faytamiin C-ga ku jira tufaaxdu waa difaaca wadnaha, xididdada bukaanka ee wadnaha qaba qayb caafimaad qabta.
Dadka cunay tufaaxa aad ayey ugu yartahay inuu ku dhaco hargab marka loo eego kuwa aan cunin wax yar ama kayar tufaax .Sababtoo ah, saynisyahano iyo dhakhaatiirta qaar waxay ugu yeeraan tufaaxa "miro dhan walba leh oo caafimaad leh" ama "xirfadlayaal guud". waa mid aad u daran, cunida tufaaxa badan waxay hagaajin kartaa nidaamka neefsashada iyo shaqada sanbabada, waxay ka ilaalin kartaa sambabaha siigada iyo qiiqa hawada.
Hore: Dhoofinta 2020 miraha cusub ee miraha tufaaxa ah oo leh qiimo wanaagsan
Xiga: Dabiiciga Cafimadka Aasaasiga ah ee Caadiye Caafimaad Ahaan Cadaan Caan ah
Dhoofinta 2020 miro cusub oo miro tufaax ah leh goo ...